Ederede Bob Croft na Martech Zone |
Edemede site na Bob Croft
Friday, December 11, 2020 Fraịde, Jenụwarị 22, 2021 Bob Croft
Mgbe ozi ịntanetị tozuru ya, ọ nwere ike ịkpata ọtụtụ ọgba aghara. Ọ dị mkpa ịbanye na ala ya - ngwa ngwa! Ihe mbụ anyị kwesịrị ịmalite bụ ịghọta ihe niile na-abanye na ịnweta email gị na igbe mbata… nke a gụnyere ịdị ọcha data gị, aha IP gị, nhazi DNS gị (SPF na DKIM), ọdịnaya gị, na ihe ọ bụla na-akọ na email gị dị ka spam. A bụ ihe infographic na-enye a
Kedu ihe adreesị IP dị na ya na Kedu ka akara IP gị si emetụta Deliverability Email gị?
Tọzdee, Disemba 8, 2020 Wednesday, December 30, 2020 Bob Croft
A bịa na izipu ozi ịntanetị na ịgbalite mkpọsa ozi ịre ahịa email, akara IP gị, ma ọ bụ aha IP, dị ezigbo mkpa. A makwaara dị ka akara onye na-ezipụ, aha IP na-emetụta nnyefe email, nke a bụ isi maka mgbasa ozi email na-aga nke ọma, yana maka nkwukọrịta ọtụtụ ebe. N'isiokwu a, anyị na-enyocha ọnụ ọgụgụ IP karịa nke ọma ma lelee otu ị ga - esi jigide aha IP siri ike. Kedu ihe bụ akara IP